Waxa manta xarunta dhaxe ee Rugta Ganacsiga lagu qabtay shir sanadeedkii qurba joogta. - Somali Chamber of Commerce and Industry
Home » News » Waxa manta xarunta dhaxe ee Rugta Ganacsiga lagu qabtay shir sanadeedkii qurba joogta.
Waxa manta xarunta dhaxe ee Rugta Ganacsiga lagu qabtay shir sanadeedkii qurba joogta.
Kullankaan ayaa waxa sooqaban qaabiyay mamulka sare Rugta Ganacsiga, ujeedka kulankani ayaa kusab-sanaay isxog wareysi udhaxeeyo qaar kamid ah qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa kusoo kordhiyay dalka hal abuurada ganacsi. Kulankaani ayaa ah mid sanadle ah oo ay Rugtu qabato.
Agaasimaha Guud ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed Mudane Abdi Abshir Dorre ayaa halkaas ka soo jeediyay warbixin aad udheer oo uu kaga hadlaayay taarikhahi kala duwanaay ee dalka iyo guud ahaan ganacsiga, asaga oo sheegay fursadaha maal gashi iyo caqabadaha kajira ganacsiga dalka.
Ugu danbenti waxaa kulanka soo xeray Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed Mudane Maxamud Cabdi Cali (Gabeyre) asaga oo sheegay in qurba joogta dalka ay wax yaabo fara badan u qabteen hatane ay tahay iney ku soo kordhiyaan fikrado ganacsi oo wax ku ol ah, kuwaasi oo aan horay dalka uga jirin.